फेरी विहे गर्दै श्वेता खड्का, के उनको श्रीकृष्णसंग भन्दा पहिले नै प्रेम थियो ? - Janadesh Khabar
फेरी विहे गर्दै श्वेता खड्का, के उनको श्रीकृष्णसंग भन्दा पहिले नै प्रेम थियो ?
जनादेश खबर	काठमाडौं	मंसिर १९, २०७७
नायिका श्वेता खड्काले आगामी मंसिर २२ गते विवाह गर्दैछिन् । उनले धनगढीका विजयेन्द्र सिंह रावतसँग विवाह गर्न लागेकी हुन् । गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा २२ गते हुने विवाहको पुष्टि श्वेता र विजयेन्द्रको विवाहको कार्डले गरेको हो ।
ताको मंसिर ५ मा नै विवाह हुने हल्ला बाहिरीएको थियो तर, उनले त्यतिबेला सत्यता नभएको जानकारी दिएकी थिइन् । हाल भने वैवाहिक कार्यक्रमको कार्ड नै सार्वजनिक भएको छ । उनीहरु दुईजना लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको समाचार माध्यमहरुले बताउँदै आएका थिए । यसपटकको दशैको टिका यी जोडीले सँगै लगाएको तस्वीर पनि बाहिरिएको थियो ।
१९ मंसिर २०७७, शुक्रवार ०८:२० बजे प्रकाशित
अब मज्जाले गाँजा खेती गर्न पाइने !
प्रधानमन्त्री ओली ७० वर्षमा प्रवेश
रुबिना दिलैकले जितिन बिग बोस १४ औँ संस्करणको उपाधि
अनलाइन जोक्स प्रतिस्पर्धा तयारी अन्तिम चरणमा
विवाहपछि अभिनेत्री काजलले गरिन् रोगबारे खुलासा : भन्छिन् ‘लजाउनुपर्ने कुरा छैन’